बार्सिलोनामा लियोनल मेस्सीले बनाए अर्को रेकर्ड ! - Internet Khabar
बार्सिलोनामा लियोनल मेस्सीले बनाए अर्को रेकर्ड !
November 5, 2017 Internet Khabar
एजेन्सी । शनिबार राति भएको बार्सिलोना र सेभियाबीचको खेलसँगै लियोनल मेस्सीले ६ सय खेलको इतिहास कायम गरेका छन्।
गएराति मेस्सीले ६ सय खेलको इतिहास बनाउँदा गोल गरेर अविस्मरणीय बनाउँछन् भन्ने आशा सबैले गरेका थिए। तर पनि घरेलु मैदानमा शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै बार्सिलोनाले सेभियामाथि २–१ को जित हासिल गर्‍यो।
बार्सिलोनाले खेल सुरु भएको तेस्रो मिनेटमै अग्रता लिने सुनौलो अवसर पायो। तर लियोनल मेस्सीको कमजोर प्रहारका कारण गोल हुन सकेन। बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा दर्शक क्याटलानको क्षेत्रीय झण्डा बोकेर आएका थिए।
खेलको १३औँ मिनेटमा सेभियाले पनि गोल गर्ने सुनौलो अवसर गुमायो। पासो अल्कासेरले २३औँ मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए। सेभियाका पिजारोले ५९औँ मिनेट हेडिङमार्फत उत्तकृष्ट गोल गर्दै बराबरी गरे। तर सेभियाले बराबरी गरेको ६ मिनेटमै बार्सिलोनाका लागि पासो अल्कासेरले गोल गर्दै जारी सिजनमा क्लबको अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिए।
पाँच पटकका बालोन डि ओर अवार्ड विजेता मेसी बार्सिलोनामा ६ सय खेल खेल्ने तेस्रा खेलाडी हुन्। बार्सिलोनाबाट जाभी हर्नान्डेजले ७ सय ६७ खेल खेलेका छन् भने अहिलेका कप्तान आन्द्रेस इनियस्ताले ६४२ खेल खेलेका छन्।
३० वर्षीय अर्जेन्टाइन स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले सन् २००४ मा बार्सिलोनाबाट खेल्न सुरु गरे यता ५ सय ९९ खेलबाट ५ सय २३ गोल गरेका छन् । लियोनल मेस्सी अहिलेसम्म बार्सिलोनाबाट सबै प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी पनि हुन् ।
रजत पदक विजेता पाराग्लाइडिङ टिमलाई पोखरामा स्वागत गरिने